China DC Linear Actuator Electric FD1 mveliso kunye nabenzi | Ukuhlanjululwa
Isixhobo se-FD1 yeyona mveliso yethu ithengisa kakhulu. Kukhetho olufanelekileyo kwiiprojekthi ezininzi, ngakumbi ifanitshala. Ingaphezulu. umthwalo ngowama-6000N kunye nengxolo ephantsi. Isetyenziswa ngokubanzi ifanitshala, ezonyango, ezokuvelisa kunye nezinto ezizenzekelayo zeshishini, umzekelo isitulo sokuthambisa, ibhedi yasesibhedlele kunye nesihlalo samazinyo.
5. IXESHA LEWARanti NGENYANGA EZI-12
Ukukhetha isinxibelelanisi sangaphambili
Ukuba akukho mfuneko ngayo, sisebenzisa uhlobo oluqhelekileyo ① ngokubanzi.
Iinketho zoQhagamshelo lwangasemva
Ukuba akukho mfuneko ngayo, sisebenzisa uhlobo oluqhelekileyo ④ ngokubanzi.
(1) Jonga ukuba iintambo zombane ziyahambelana neemfuno zomgaqo wombane kwaye umbane wombane uchanekile. Umbane uboniswa kwileyibhile yebhokisi yolawulo.
(2) Jonga ukuba zombini ufakelo lweziphelo ze-actuator yomgama zime nkqo, ingaba i-fulcrum ipakishwe kakuhle.
(3) Xa amandla eqhagamshelwe, jonga ukuba ngaba iarhente yokuhamba ye-actuator isebenza ngokuchanekileyo kwisiphatho sesandla.
I-actuator ye-FD1 isetyenziselwa isofa yombane kunye nesihlalo sokuphakamisa, isebenzisa kunye nebhokisi yolawulo lweSanxing / iAdaptha kunye nolawulo olukude.
I-actuator ye-FD1 isetyenziswa ngokubanzi njengokuvula ifestile.
I-actuator ye-FD1 isetyenziselwa indawo yokulala esibhedlele.
Egqithileyo I-CBDY-2 yokuBonelela ngaMandla
Okulandelayo: Umkhondo we Linear Actuator 12v 24v FD3
Ulawulo lwe-Wireless Remote lweSibhedlele, Umatshini wokuhambisa umbane omncinci, Ulawulo lweBhedi yoMbane, Ulawulo lweBhedi yasesibhedlele, Ulawulo lweBhedi yonyango kude, Isantya esiphezulu seLine Actuator,